Chii chinonzi glacier, inogadzirwa sei uye mhando dzemagirazi echando | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 07/05/2021 12:45 | Ciencia
Glaciers anomanikidzwa mashoma echando anoumba pamusoro pezviuru zvemakore. Kuenderera mberi kwechando kudonha uye tembiricha yakaderera pazasi pemadhigirii anoramba achikonzera kuti sinou iungane munzvimbo imwechete ichikonzera kuti ishanduke kuita chando. Mazaya echando ndizvo zvinhu zvakakura kwazvo pasi redu uye kunyange zvichiratidzika kunge zvakagadziriswa, zvinofamba. Inogona kuyerera zvishoma nezvishoma senzizi uye ichipfuura pakati pemakomo ichigadzira zvikara uye zororo zororo. Vanogona zvakare kugadzira matombo uye nyanza.
Muchikamu chino tiri kuzokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezvemazaya echando, mavambo avo uye hunhu hwavo.
1 Chii chinonzi glacier
3 Zvikamu zvegirazi
4 Mhando dzechando chiripo
Chii chinonzi glacier
Girazi rinoonekwa seakasara ekupedzisira Zera rechando. Panguva ino, tembiricha yakadzikira yakamanikidza chando kuti chiende kunharaunda dzezasi uko mamiriro ekunze ave kudziya. Parizvino, tinogona kuwana akasiyana marudzi echando mumakomo emakondinendi ese kunze kweAustralia uye zvimwe zviwi zvegungwa. Pakati pematanho 35 ° kuchamhembe uye 35 ° kumaodzanyemba echando kunogona kungoonekwa mukati Rocky Mountains, muAndes, muHimalaya, muNew Guinea, Mexico, East Africa uye paGomo Zard Kuh (Iran).
Ndiwo iwo huwandu hwenzvimbo inogara ma glaciers izvo zvingangoita inoumba 10% yenyika yese yepasi. Kazhinji ivo vanowanzoonekwa munzvimbo dzakakwirira dzemakomo nekuti mamiriro ezvakatipoteredza anoitisa. Ndokunge, kune tembiricha yakaderera uye kunaya kwakanyanya. Isu tinoziva kuti kune mhando yemvura inonaya inozivikanwa nezita remvura yekunaya kwemakomo, iyo inoitika panokwira mhepo mudenga ichizoguma yanaya uye mvura ichinaya pamusoro pemakomo. Kana tembiricha iri pazasi pe 0 madigiri ichienderera, kunaya uku kungave muchimiro chechando uye vanozopedzisira voisa kudzamara vaumba mazaya echando.
Mazaya echando anoonekwa mugomo refu uye kumatunhu akapora anopihwa mazita akasiyana. Iwo anoonekwa mumakomo marefu anonzi maalpine glaciers nepo echando pamatanda anozivikanwa semazaya echando. Munguva yekudziya mwaka, vamwe vanoregedza meltwater nekuda kwekunyungudika kwayo, ichigadzira miviri yakakosha yemvura yemhuka nemiti. Uye zvakare, inobatsira kwazvo vanhu sezvo mvura iyi ichishandiswa kupa vanhu. Iri ndiro dura rakakura kwazvo remvura nyowani papasi, riine zvikamu zvitatu zvezvina zvaro.
Tichaona kuti ndeapi matanho akakosha anoitika pakuumbwa kwechando. Inosanganisira kusingaperi kwechando munzvimbo imwechete gore rese. Kana nzvimbo yacho iine tembiricha dzakaderera nguva dzose chando chinochengetwa kusvikira chando chaumbwa. Mumhepo, mamorekuru ese emvura anonamatira kune tunhu tuduku uye anoita zvimiro zvekristaro. Ndipo apo mamwe mamorekuru emhute yemvura anonamatira kune makristasi akaumbwa uye hunhu hwemazaya echando atakajaira kuona akaumbwa.
Snowflakes inowira munzvimbo yepamusoro yemakomo uye inochengetwa nekufamba kwenguva mushure mekudonha kwechando. Kana chando chakakwana chikaunganidzwa, maaizi echando anotanga kuumbika Gore ne gore huremu hwematanda matsva echando ari kuumbana unoomesa chimiro chechando zvakanyanya uye chinokonzera kuti chando chiumbike zvakare kubvira mweya uri pakati pemakristasi uchidzikira. Nguva imwe neimwe makristasi anokura uye chando chakazara chichiwedzera huwandu hwayo. Iwo mamwe mapoinzi anokurirwa nekumanikidzwa kwechando uye otanga kutsvedza pasi uye Ivo vanogadzira mhando yerwizi iyo kumagumo kweumwe neumwe wakaita seU.
Kufamba kwechando kuburikidza neecosystem kunogadzira zororo rinozivikanwa sekuzorora kwechando. Iyo inozivikanwa zvakare seglacier modelling. Iyo chando inotanga kusvika kune yakaenzana mutsara mune iri pamusoro pemutsara iwe unowana kuwanda kupfuura zvaunorasikirwa asi pazasi iwe unorasikirwa kupfuura iwe unokunda. Maitiro aya kazhinji anotora anopfuura makore zana kuti zviitike.
Girazi rakagadzirwa nezvikamu zvakasiyana.
Kuunganidza nzvimbo. Ndiyo nzvimbo yepamusoro soro panowira chando uye inoungana.
Nzvimbo yekudzorera. Munharaunda ino maitiro ekubatanidza uye kubuda kwemhepo kunoitika. Ndipo pane iyo glacier inosvika pachiyero pakati pekuwedzera uye kurasikirwa kwemahombe.
Kutsemuka. Idzi ndidzo nzvimbo dzinoyerera chando nekukurumidza.
Moraines. Aya ndiwo mabhande erima anoumbwa nezvidimbu zvinoumba pamacheto nemusoro. Matombo anodhonzwa nechando anochengetwa uye kuumbwa munzvimbo idzi.
Chiteshi. Ndiwo mugumo wezasi weaizi apo chando chakaunganidzwa chinonyunguduka.
Mhando dzechando chiripo
Iyo glacier inogona kuverengerwa munzira dzakawanda, kunyangwe zvinoenderana nemodelling yayo uye kuumbwa kwayo. Ngatione kuti ndeapi marudzi akasiyana aripo:
Alpine glacier: Iyo inozivikanwa zvakare nezita rekuti gomo glacier uye ndeaya anogadzirwa mumakomo marefu nekuunganidzwa kwechando.
Glacier circus: ibheseni rakaumbwa sekeresenti apo mvura inoungana zvishoma nezvishoma.
Makungwa echando: iwo madhipatimendi emvura anotangira munzvimbo dzedanho remupata uye pane dzimwe nguva idzo dzakagwamba nechando uye dzimwe dzisiri.
Glacier Valley: uyu mhedzisiro yekukanganisa chiito cherurimi rwechando. Inowanzo kuve nemupata wakaita seU uye inogadzira matombo akareba.
Inlandsis: iwo mahombe mahombe echando anofukidza zvizere nzvimbo yese uye anopedzisira achifamba kuburikidza nemasimba kusvika kugungwa.
Drumlins: Iwo mamirwi anoumbwa ne sedimentary zvinhu izvo glacier yakwevera pamwe nekufamba kwayo.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu iwe unogona kudzidza zvakawanda nezve glacier uye maitiro ayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Meteorology » Ciencia » Chii chinonzi glacier uye inogadzirwa sei